Gadiidleyda Hargeysa oo Cabasho ka ah maamulka Muuse Biixi | KEYDMEDIA ONLINE
Gadiidleyda Hargeysa oo Cabasho ka ah maamulka Muuse Biixi
Darawaladda gaadiidka raaxada ee tagaasida, ayaa cabasho xooggan ka muujinayo canshuur xad dhaaf ah oo uu ku soo rogay maayarka Magaalada Hargeysa ee maamulka gooni isu taaga ku dhaawaqay ee Somaliland.
HARGEYSA- Soomaaliya - Wadayaasha Gaadiidka Taksiyada, ayaa Cabasho ka muujinaya Dowladda Hoose ee Magaalada Hargeysa, taasoo kordhisay lacagihii Canshuurta ahaa ee ay bixin jireen bil walba.
Darawalada ayaa lagu canshuuray in bishii ay bixiyaan kharash dhan $80 dollar, taasoo aad uga badan lacagtii ay hore u bixin jireen oo ahayd $30 dollar.
Qaar ka mid ah wadayaasha oo dhigay dibadbax, ayuu maamulka Somaliland u taxaabay xabsiga, iyadoo laga xareeyey gaadiidkii ay ku shaqeysanayeen, waana tan kordhisay walaaca ay muujinayaan.
Ragga taksiilayaasha ka ah Hargeysa oo u badan dhallinyaro, ayaa sheegaya inuusan jeebkooda soo galin caddada dhaqaalaha lagu amray, waxana ay tilmaameen in shaqa la'aanta heysata ay sii xoojineyso daruufaha ku gadaaman qoysaskooda.
Darawaladda ayaa tibaaxaya in suuqa uu maalinba ceyn yahay, waxana ay hoosta ka xariiqeen in ay mararka qaar dhacdo in ay aqaladooda ku laabtaan iyagoo fara maran, waxana ay dalbanayaan in laga qafiifiyo canshuurta lagu soo rogay.
Wadayaasha tagaasida, ayaa ka qoomameeyey codkii ay siiyeen duqa Hargeysa Cabdi Kariin Axmed Mooge, oo ah nin dhallinyaro ah, oo tartankii doorashadda jagada ugu sareysa Gobolka Maroodi-Jeex ku hantay codadkii ugu badnaa.
Dowladda hoose ee Hargeysa oo arrintaasi ka hadashay, ayaa sheegtay in ay waajib tahay bixinta canshuurtaasi, oo sida ay tilmaameen wax loogu qabanayo gaadiidleyda, isla markaana lagu dhisayo jidadka bur bursan, waxana ay sheegeen in canshuurtaasi adag ay qaadayaan bilooyin kooban.